Dib u eegista Outfunnel: Isku-dubarid Xiriirinta WordPress iyo Hawsha CRM-kaaga | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Dib u eegista Outfunnel: Isku xidh Xiriirada WordPress iyo Hawsha CRM kaaga
Dib u eegista Outfunnel: Isku xidh Xiriirada WordPress iyo Hawsha CRM kaaga
Haddii aad leedahay qalabka maaraynta xidhiidhka macmiilka (CRM) iyo goobta WordPress, waxaa laga yaabaa inaad la kulantay dhibaatadan - sidee ugu xidhi kartaa xidhiidhada iyo xogta mareegahaaga WordPress iyo CRM kaaga?
Outfunnel waa plugin iyo adeeg xaliya dhibta xanuunka adigoo kuu ogolaanaya inaad isku hagaajiso xiriirada iyo kala xidhiidh hawsha degelkaaga WordPress ilaa CRM-ka aad dooratay.
Hadafka ayaa ah inaad "ku xidhi karto xogta iibka iyo suuq-geynta si qoto dheer oo sahlan" si aad sawir wanaagsan uga hesho macaamiishaada oo aad kor ugu qaaddo dakhligaaga.
Dib u eegista Outfunnel-ga gacanta ku haysa, waxaanu si qoto dheer u eegi doonaa qalabkan oo aanu tusno inaad u isticmaali karto inaad WordPress ku xidho CRM-kaaga (inkastoo ay sidoo kale taageerto dhufto ee aan ahayn WordPress).
Dib u eegista Outfunnel: Eeg Astaamaha
Heer sare, Outfunnel wuxuu kaa caawinayaa inaad isku hagaajiso xiriirada mareegahaaga WordPress (ama goobo kale, sida Wix) CRM kaaga. Laakin ma aha kaliya isku xidh xogta xidhiidhka, waxa ay sidoo kale kaa caawinaysaa in aad isku xidho xidhiidh kasta website iyo hawlaha iimaylka.
Tusaale ahaan, CRM-kaaga, waxaad arki kartaa marka dadku soo booqdeen website-kaaga iyo meesha ay ka yimaadeen, foomamka ay buuxiyeen, iimaylada ay fureen ama ka jawaabeen, iwm.
Mar labaad, fikradda ayaa ah in Outfunnel ay kaa caawiso inaad ku xidho xogtaada iibka (CRM) iyo xogta suuqgeynta (website iyo iimaylka) si aad si hufan ugu kori karto ganacsigaaga.
Si lagaaga caawiyo inaad taas samayso, waxay ku siinaysaa astaamo kala duwan.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee aan diiradda saari doono dib u eegistan ayaa ah xiriiriyaha app. Tani waa waxa kuu ogolaanaya inaad ku xidho degelkaaga WordPress iyo CRM-gaaga si aad si toos ah ugu dhejisid xidhiidhada foomamkaaga WordPress ilaa CRM kaaga. Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa CRM-gaaga qalabkaaga suuq-geynta iimaylka si aad iskugu xidho ka-qaybgalka iimaylka suuq-geynta CRM-gaaga.
Marka lagu daro isku-dubaridka xogta rasaasta, Outfunnel waxa kale oo uu kuu ogolaanayaa inaad la socoto dhaqdhaqaaqa shabakada oo aad xogtaas ku dhejiso CRM kaaga. Tusaale ahaan, waxaad qoraal ku samayn kartaa CRM-kaaga mar kasta oo xidhiidhi soo booqdo goobtaada.
Marka laga soo tago sifooyinkaas, Outfunnel waxay sidoo kale bixisaa dhowr qalab oo kale:
Ololayaasha - Waxaad ka soo diri kartaa hal mar ama olole toos ah iimaylka dashboardkaaga Outfunnel oo aad isku dhejin kartaa dhammaan xogta ka-qaybgalka CRM-gaaga. Tusaale ahaan, waxaad la socon kartaa cidda furtay, gujisay, ka jawaabtay, iwm.
Nala Xiriir - waxaad ku arki kartaa dhammaan xiriiradaada Outfunnel (iyo sidoo kale CRM kaaga) oo waxaad abuuri kartaa qaybo faahfaahsan.
Dhibcaha hogaaminta - waxaad dejisan kartaa shuruuc kuu gaar ah si aad u dhaliso hogaankaaga oo aad xogtaas ugu dhejiso CRM kaaga.
Isku xirka Xiriiriyaha App Outfunnel
Waqtigan xaadirka ah, plugin-ka Outfunnel WordPress wuxuu taageeraa aaladaha CRM ee soo socda sida meeshaad u socoto:
Intaa waxaa dheer, Outfunnel waxa kale oo ay la midaysaa plugins foomka caanka ah ee WordPress si aad u isku dhejiso xogta foomka CRM kaaga.
Hadda, Outfunnel waxay taageertaa widgetka Foomka Elementor iyo Foomka Xiriirka 7, kaas oo xoogaa xaddidan.
Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale ka shaqeynayaan isku-dhafka WPForms, Foomamka Cuf-jiidadka, iyo Foomamka Ninja, kuwaas oo dabooli doona inta badan doorashooyinka caanka ah. Marka marka isdhexgalkaas uu baxo, waxaan dhihi lahaa dadka badankiisa waa inay ku fiicnaadaan doorashada mid ka mid ah xulashooyinkaas.
Isku-dhafkaas ayaa soo socda dhawaan, si ay halkan u joogaan wakhtiga aad akhrinayso dib u eegistayada Outfunnel.
Wixii ka dambeeya foomamka plugins iyo CRM-yada, Outfunnel waxa kale oo ay la shaqaysaa Mailchimp iyo ActiveCampaign. Tusaale ahaan, haddii aad isticmaalayso labada Pipedrive iyo Ololaha Firfircoonoo ay la socdaan WordPress), waxaad isku dhejin kartaa xogtaada ActiveCampaign ee Pipedrive CRM oo waxaad ku xidhi kartaa xiriirada WordPress.
Ugu dambeyntii, inta aan diirada saarnay WordPress dib u eegistayada Outfunnel, Outfunnel kuma koobna WordPress - sidoo kale waxay la shaqeysaa aaladaha kale ee mareegaha, oo ay ku jiraan is dhexgalka Wix go'an.
Sida Loo Isticmaalo Isku-xiraha App-ka Outfunnel ee WordPress
Hadda, aynu gacmaha-qabanno plugin/adeegga Outfunnel oo waxaan ku tusi doonaa waxa ay tahay in la sameeyo xiriiriyaha abka oo aan ku xidho goobtaada WordPress iyo CRM kaaga.
Si aad u habayso Outfunnel on WordPress, waxaad u baahan doontaa:
Koontada Outfunnel - waxaad heli kartaa tijaabo bilaash ah oo 14 maalmood ah iyada oo aan loo baahnayn kaarka deyntawax badan oo ku saabsan qiimaha dambe).
Qalabka Outfunnel ee bilaashka ah, kaas oo laga heli karo WordPress.org.
1. Isku qor Outfunnel
Si aad u bilowdo, waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaan geliso akoon Outfunnel
Iska diwaangeli Outfunnel
2. Xaqiiji CRM kaaga
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad ku xidhid Outfunnel CRM ee aad dooratay. Mar labaad, waxaad haysataa saddex doorasho:
Tusaalahan waxaan u isticmaalayaa Pipedrive.
Waxaad dejin kartaa tan adiga oo dooranaya CRM-gaaga gudaha Xiriiriyaha App tab iyo guji Xaqiiji:
Pipedrive (oo waxaan qiyaasi lahaa CRM-yada kale), tani waxay ku lug leedahay uun gujinta badhanka soo baxay:
3. Habee Plugin-ka WordPress
Marka xigta, dooro plugin foomka WordPress ah oo aad rabto inaad ku xidho CRM-gaaga.
Mar labaad, Outfunnel waxay hadda taageertaa Foomka Elementor widget-ka iyo Foomka Xiriirka 7, iyadoo la taageerayo WPForms iyo Foomamka Cufisjiid ee imanaya Sebtembar 2021 iyo Foomamka Ninja dambe ee Q4.
Markaad dooratid foomkaaga, waxaad gujisaa reserved:
Tani waxay tusi doontaa popup ka kooban saddex qaybood oo macluumaad ah. Ka dhig xogtan mid anfaca sababtoo ah waxaad u baahan doontaa inaad ku darto dashboardkaaga WordPress:
Marka xigta, fur tab cusub oo tag dashboardkaaga WordPress:
Ku rakib oo ka shaqaysii plugin-ka Outfunnel ee bilaashka ah ee ka socda WordPress.org.
Tag Dejinta → Outfunnel gudaha dashboardkaaga WordPress.
Nuqul ka samee oo ku dheji faahfaahinta interface-ka Outfunnel una dheji goobaha plugin ee ku dhex jira dashboardka WordPress.
Riix Keydso Isbedelada.
4. Dhammee Dejinta Xiriirinta Foomkaaga
Hadda, dib ugu noqo dashboardka Outfunnel oo dhagsii Xaqiiji rakibidda badhanka soo booda.
Ka dib, guji Abuur Xiriir badhan:
Tani waxay furi doontaa is-dhexgal cusub oo aad ku xidhi karto foomam gaar ah CRM-gaaga.
Marka hore, isticmaal hoos u dhaca si aad u dooratid foomamka (yada) aad rabto in aad raadraacdo. Outfunnel waxay si toos ah uga ogaan doontaa foomamkan plugin foomka WordPress ee aad dooratay.
Kadib, waxaad samayn kartaa khariidad dhulka laga bilaabo foomkaaga ilaa meelaha Pipedrive. Khariidaynta runtii waa sahlan tahay sababtoo ah Outfunnel ayaa si toos ah kuu ogaan doonta dhammaan goobaha adiga.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad isticmaasho waa inaad isticmaasho meelaha hoos u dhaca si aad ugu sheegto Outfunnel meesha aad rabto inaad ku darto qayb kasta oo xog ah Pipedrive:
Sidoo kale lagaagama baahna inaad khariidad ku sameyso dhammaan goobaha foomamka - waad ka boodi kartaa qaar haddii loo baahdo.
Hoos u sii soco, waxaad dooran kartaa sida aad u rabto in foom cusub lagu soo gudbiyo CRM kaaga. Waqtigan xaadirka ah, Outfunnel kaliya waxay taageertaa duubista iyaga sidii waxqabad, markaa runtii ma jiro doorasho la sameeyo. Si kastaba ha noqotee, waxay ka shaqeynayaan inay ku daraan ikhtiyaarka ah inay cusbooneysiiyaan goob gaar ah oo ku taal CRM kaaga, si aad u doorato waqtiga aad tan akhrinayso.
Oo hoostaas, waxaad arki doontaa ikhtiyaarka ah inaad awood u yeelatid raadinta shabakadda. Tani waxay u ogolaan doontaa Outfunnel inay la socoto booqashooyinka shabakadda ee hoggaanka buuxinaya foomkan. Tusaale ahaan, halka hoggaanku ka yimi, bogaggee bay daawadeen, iyo booqashooyinkooda mustaqbalka.
Horay ayaad tan u dejisay markii aad habaysay plugin-ka WordPress, marka Outfunnel ayaa si toos ah awood ugu yeelan doonta.
Waana taas! Si aad xiriirkaaga uga dhigto mid nool, dib ugu laabo dhanka sare ee bogga oo guji Guddi.
5. Dir qaar ka mid ah soo gudbinta imtixaanada
Hadda, waxaad buuxin kartaa foomka si aad u hubiso inuu shaqaynayo - Outfunnel waa inuu xogta ku dhejiyaa CRM-gaaga 30 ilbiriqsi gudahood.
Halkan, waxaad ku arki kartaa xidhiidh cusub Pipedrive ka soo gudbinta Foomka xidhiidhka 7. Waxa kale oo aad arki kartaa in ay jirto hawl ku saabsan soo gudbinta foomka:
6. Habee Falanqaynta Shabakadda
Markaad dejiso xiriiriyaha abka, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso hal tallaabo oo kale oo aad dejiso falanqaynta shabakadda. Tan waxaad ka samayn kartaa Web tab ee dashboardka Outfunnel.
Tabtani waxay u adeegtaa laba ujeedo oo waaweyn:
Waxaad arki kartaa xogta dhaqdhaqaaqa booqdaha aasaasiga ah.
Waxaad u habayn kartaa sida loo waafajiyo booqashooyinka shabakada CRM kaaga.
Si aad u xakameyso sida Outfunnel ay isku xirto raadinta webka ka socda goobtaada WordPress ilaa CRM kaaga, waxaad aadi kartaa Duubista Hawlgelinta tab:
Iyadoo plugin Outfunnel WordPress uu yahay bilaash lagana heli karo WordPress.org, waxaad u baahan doontaa akoon Outfunnel si aad u isticmaasho.
Si loo tijaabiyo Outfunnel, dhammaan qorshooyinka waxay wataan a Tijaabo bilaash ah oo 14-maalmood ah oo aan lahayn kaarka deynta looma baahna.
Taas ka dib, waxaa jira saddex ikhtiyaar oo qiimo jaban. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya qorshayaasha ayaa ah tirada…
dhacdooyinka xiriiriyaha app
iimaylka suuq geynta
booqashooyinka mareegaha (loogu talagalay la socodka booqdaha shabakadda).
Outfunnel waxa kale oo ay haysaa qorshayaal lagu daro sifada dhibcaha hogaanka sare ee qorshayaasha heerka sare.
Waxaad hoos ku arki kartaa faahfaahinta qiimaha oo dhan:
Si lagaaga caawiyo inaad kaydsato xoogaa lacag ah, waxaad isticmaali kartaa kuubankeena gaarka ah si aad u hesho a 25% dhimis saddexda bilood ee ugu horreeya:
Dabka ka baxa
Hel 25% dhimis 3da bilood ee ugu horeeya Outfunnel - la soco booqashooyinka degelka iyo isku xidhka soo gudbinta foomka CRM kaaga.
Ka hel 25% dhimis 3da bilood ee ugu horeeya Outfunnel - la soco booqashooyinka degelka iyo isku xidhka soo gudbinta foomka CRM kaaga. Muuji Wax Yar
Fikradaha ugu dambeeya ee Outfunnel
Guud ahaan, waxaan ogaaday in Outfunnel ay tahay mid aad u fudud in la isticmaalo oo ay bixisay balamaheedii.
Waxaan u maleynayaa in ay tahay qalabka kugu habboon runtii waxay ku xiran tahay waxaad raadineyso. Haddii aad rabto inaad isku xidho xiriirada CRM-gaaga oo ah dhacdo hal mar ah, waxaan u maleynayaa inay jiraan qalab badan oo taas samayn kara, oo ay ku jiraan isdhexgalka tooska ah ee foomamka WordPress ee caanka ah.
Meesha aan u maleynayo in Outfunnel ay ku darto qiimaha waa taas sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isku dhejiso booqashooyinka/hawlaha shabakada (iyo ka qaybgalka iimaylka) CRM kaaga. Markaa kaliya maahan inaad isku xidhid xidhiidhada, waxaad isku dubaridaysaa sida ay xidhiidhadaasi ula falgalaan mareegahaaga iyo iimayladaada.
Haddii aad u baahan tahay shaqadaas, Outfunnel waxay ku siinaysaa hab aad u fudud oo lagu dejiyo, iyo sidoo kale astaamo dheeri ah sida dhibcaha rasaasta iyo awoodda dirida iimaylka.
Ku bilawda Outfunnel waxay qaadataa dhowr daqiiqo oo keliya, marka aad bay u fududahay in la tijaabiyo. Waxa kale oo aad helaysaa tijaabo 14 maalmood ah iyada oo aan loo baahnayn kaarka deynta.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka barato ama aad isku daydo, isticmaal badhamada hoose:
7-da Gole ee ugu Wanaagsan Android ee Horumarinta
Sida loo Hagaajiyo Khaladaadka Dhimasho: Waqtiga ugu badan ee fulinta ayaa ka gudbay WordPress (6 Hababka)